Ogaden News Agency (ONA) – Waraaq Furan Oo Kusocota Dhamaan Xubnaha JWXO.
Waraaq Furan Oo Kusocota Dhamaan Xubnaha JWXO.
Posted by Dulmane	/ September 8, 2018
KA: Hoggaanka Warfaafinta Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO)
KU: Dhamaan xubnaha iyo Howlwadeenada JWXO
OG: Xoghayaha Guud ee JWXO
Ujeedo: Wargelin iyo Hogo-tusaalayn
Halgamayaal sida aan la wada-socono waxay shacabka Soomaalida Ogaadeeniya mudo dheer hayaan ugu jireen hanashada dhulkooda dhacan iyo aayo-ka-tishaga ay xaqa uleeyihiin, si ay ula sinaadaan shucuubta kala duwan ee aduunka ku dhaqan, waxayna Jabhada JWXO ku taagan tahay waddadii lagu ballamay oo ahayd raadinta xuquuqda rasmiga ah ee shacabka Soomaalida Ogaadeeniya.
Intaas ka dib Jabhada JWXO waxay soo dhawaysay baaqii Raysal wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiye Axmed oo ahaa in dowlada Federaalka Itoobiya ay wadaxaajoodyo nabadeed la furayso Jabhadaha hubaysan,oo Jabhadda JWXO ay ka mid tahay, isla markaana ay waddada u xaadhayso sidii ay Jabhaduhu hawlohooda siyaasadeed u qabsan lahaayeen iyagoon cabsi ka qabin in waxyeello soo gaadho.
Hadaba, si ay JWXO kalsooni u beerto, waxay wafti u dirtay Magaalada Addis Ababa, kaasoo kulamo kala duwan la yeeshay xafiisyo kala duwan oo dowlada federaalka ah hoos-yimaada, isla markaana kala hadlay arrimo siyaasad iyo amni isugu jira.
Sidoo kale Jabahadda Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) waxay taageertay, soona dhawaysay maamulka cusub ee loo magacaabay Ogaadeenya, kaas oo Jabhaddu ay ka filayso wanaag iyo in danaha shacabka laga wada-shaqeeyo.
Waxay kaloo Jabhaddu go’aansatay in la raadiyo midnimada umada Soomaaliyeed ee Ogaadeenya, waxayna gudaha iyo dibadaba ka billowday abaabul lagu baadi-goobayo midnimada shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato.
Waxay JWXO gudaha wadankii u dirtay wufuud kala duwan, oo min Tuulo ilaa Gobol booqan doona, kuwaasoo ka shaqaynayaa midnimada dadka Soomaalida ah. Sidoo kale waxaa dibada ka socda shirar Soomaalida loo qabanayo oo lagu raadinayo midnimo iyo Soomaalinimo.
Hadaba waxaa dhamaan xubnaha kala duwan ee JWXO sida Kaadirka iyo CWXO laga codsanayaa in ay geed dheer iyo geed gaabanba ufuulaan sidii loo midayn lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee Ogaadeenya ku dhaqan iyo walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba.
Waxaa Kaadirka iyo Howlwadeenka JWXO la xasuusinayaa in ay iska ilaaliyaan wax kasta oo keeni kara dhib iyo kala-fogaansho ummada dhexdeeda ah, waana in ay iska ilaaliyaan hadallada xanafta leh ee shakiga dhalin kara.
Xubnaha JWXO iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee Ogaadeenya ku dhaqan waxaa la xasuusinayaa in ayna suuragal ahayn in cid waliba ay iska dhex aragto wasiirrada deegaanka loo magacaabay. Arrintaasi waa dabiici oo gobol walba iyo degmo walba wasiir looma magacaabi karo, hase yeeshee marba wasiirrada la magacaabo ayaa ummada oo dhan matalaya, sidaas darteed waa in la joojiyo hadallada qabyaalada ku salaysan, qof kastana uu u hadlo Soomaalinimo, isagoo gdanta guud ka duulaya.
Waa in shacabka Soomaalidu ay joojiyaan qabiil hebal ayaa badan iyo qabiil hebal xagay dagaan, waxaana dhulka iska leh Soomaali 100%, waana in aan la qaadanin wax Soomaalinimo ka yar. Middaas oo kaliya ayaa lagu gaadhi karaa himilada aan higsanayno.
Waxay Jabhaddu si dhaw ula socotaa oo cambaaraynaysaa cid kasta oo fad-qalallo ku dhex wada shacabka muddada dheer dulmanaa ee gumaysiga ku jiray, waxayna bogaadinaysaa cid kasta oo Nabada iyo Midnimada ka shaqaysa.
Hoggaanka Warfaafinta JWXO wuxuu howl-wadeenka JWXO ka codsanayaa in ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan, isla markaana midnimada ilaaliyaan, iyagoon haddana ka leexanaynin wadiiqadii xorriyada ee muddada dheer lagu soo taagnaa.
Hogaanka Warfaafinta Jabahadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya,
Xassan Muxumad Macalim